‘खोपमा भारतको मात्रै भर परेका छैनौं, कोभ्याक्सभन्दा अगाडि नै ल्याउँछौं’ – Janasamsad
मंगलबार, पौष २१, २०७७ १५०३१६
काठमाडौं । भारतले एकैदिन कोरोनाविरुद्धका दुई खोपलाई आपत्कालीन प्रयोगको मान्यता दिएसँगै नेपालको खोप सचिवालयले तयारीलाई तीव्र बनाएको छ ।
कोभिड १९ विरुद्धको खोप सचिवालयका सदस्य तथा खोप विभाग प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमका अनुसार कोभ्याक्स कार्यक्रम आउनुभन्दा अगाडि नै खोप खरिद गर्न पहल भइरहेको बताएका छन् । डा. गौतमले भने, “कुनै पनि हालतमा कोभ्याक्सभन्दा अगाडि खोप भित्र्याउने योजनाका साथ हामी काम गरिरहेका छौं । उनका अनुसार नेपालको पूर्वाधारसँग मिल्दोजुल्दो खोप उत्पादन गरेका सबै कम्पनीसँग सरकारका तर्फबाट पत्राचार भइरहेको छ । एउटा टोलीले खोप आयातको प्रक्रियामा काम गरिरहेको छ भने ल्याइसकेपछि भण्डारण र व्यवस्थापनका लागि अर्को टोलीले काम गरिरहेको छ ।”
भारतले नै उत्पादन गरेको खोप ल्याउने सम्भावना कत्तिको छ ? भन्‍ने प्रश्नमा डा. गौतम भन्छन्, “अहिले खोप उत्पादन र खरिदमा काम गरिरहेका भारत बायोटेक र सेरम इन्स्टिच्युट दुवैसँग जीटुजी प्रक्रियामार्फत पत्राचार भइसकेको छ । त्यसमा भारतबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । तर खोप ल्याउन भारतको मात्रै भर परेका छैनौं । चीनको सिनोभ्याक, रुसको स्पुतानिक भी र अमेरिकाको मोर्डनासँग पनि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।”
‘भण्डारण र व्यवस्थापनको तयारीलाई प्राथमिकता दिएका छौं’
खोप ल्याउने तयारीसँगै भण्डारण र व्यवस्थापनमा समेत जुटिरहेको डा. गौतम बताउँछन् । भारतले अहिले प्रयोगमा ल्याएका दुईवटा खोपसँगै नेपालले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका खोपहरु नेपालको कोल्डचेनमैत्री छन् । अर्थात् यी खोप २ देखि माइनस २९ डिग्रीसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ । नेपालमा अहिले ९ वटा कोल्ड रुम सञ्‍चालनमा छन् । यसमध्ये माइनस १५ देखि माइनस २५ डिग्री चिस्यान क्षमता भएको भण्डारण एउटा छ भने बाँकी कोल्डचेनहरुमा २ देखि ८ डिग्रीसम्मका खोप भण्डारण गर्न मिल्छ ।
थप खोप भण्डारणका लागि निर्माणाधीन औषधि भण्डारण कक्षलाई प्रयोग गरिने पनि गौतम बताउँछन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनमार्फत प्रदान गर्ने भनिएको कोभ्याक्स खोप पहिलो चरणमा ३ प्रतिशत र दोस्रो चरणमा १७ गरी दुई चरणमा आउनेछ । कोभ्याक्सभन्दा अगाडि खोप ल्याउँदा पनि २० प्रतिशतलाई नै लक्षित गरेर ल्याइने डा. गौतमको भनाइ छ । बाह्रखरीबाट